सबैमा अग्रेजी नयाँ बर्ष २०२१ को मंगलमय शुभकामना !
२०७७ पौष १६ गते , विहीवार प्रकाशित
भस्मासुर महाब्याधी कोरोना भाइरसले ल्याएको मानबीय तथा अर्थ–समाजिक संकटकाबीच हामी अग्रेजी नयाँ बर्ष मनाउने कुरा गरिरहेका छौं हामी प्रकृतिको उत्कृष्ट सन्तान भएर पनि मातृरुपी प्रकृतिको मनपरी दोहन र शोषण जसरी गर्दै आयौ र गरिरहेका छौं त्यसको बिरुद्ध खपि नसक्नु भए पछि प्रकृतिले समय समयमा रौद्ररुप लिएर मानिसहरुलाई अत्यन्तै पीडादायी शिक्षा दिन्छ, दिदै आएको र दिइरहेको छ । त्यसैले केवल सयम फेरिएर मात्र त्यसको सार्थकता केही हुँदैन । मानिस र समाजका गलत परम्परा, पद्धति र प्रबृत्तिहरु फेरिएर असल परम्परा स्थापित र बिकसित हुुनुपर्दछ । अनि नयाँ बर्षोत्सव प्रसन्नमय, सुखमय र उत्सबमय हुन्छ । पात्रो फेरिएको औपचारिकताको आदान–प्रदान गर्नु एउटा कर्मकाण्डीय कुरा होला । तर यो रुप पक्षीय कुरा मात्र हुनपुग्दछ । सार पुरानै रुपमा नयाँको न्यानोको पातलो लेप लगाएर रमाउनुको क्षणिक र भ्रमपूर्ण आनन्दले वास्तबिक जीवन र जगतको सही प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन । त्यसमा पनि जुन समाजमा असमानता, गरीबी, अभाव, बेरोजगारी र बिभेद ब्याप्त हुन्छ त्यहाँ साल या बर्ष फेरिएर केही फरक पर्दैन । मूल कुरा त उल्लिखित त्यस प्रकारका असैह्य बोझहरुबाट मुक्त भएर समानता, न्याय, सम्बृद्धि र सम्पन्नता प्राप्त गर्नु हो । अनि तिनको अबिच्छिन्नता र शतत निरन्तरताका साथ सुन्दर र सुनिश्चित भबिष्य निर्माण गर्नु हो ।
हामीले सर्सरी मात्र हे¥यौं भने पनि समाजको अत्यन्तै ठूलो बहुमत तल्लो बर्गका बिभिन्न तप्काहरुमा बिषादको छाया परेको छ — जसले असीम दुःख, अथाहा सागर जस्तै कति गहिरो, कति अन्धकार, कति पर्वत गुफा अदिलाई आफ्नो पेटमा समेटेको छ । बाहिर त केवल समयको स्वप्नाभाष मात्र देखिने गर्दछ । नब बर्षमा आफुलाई ल्याउनु मर्म, आशा, भरोसा तथा सही प्रकाश दिनु हो । आखिर कसैले पनि कालखण्डको गर्भको तितीर्षा देख्नु त हो । एउटा मानिसले कतिसम्म अन्धकार सहन सक्तछ ? बितेका बर्षहरुमा यस्ता अन्धकार, बढ्दो हत्याहिंसाका घटनाहरुले जुन हस्ताक्षर गरेका छन् त्यो केवल एउटा पक्ष मात्र हो । भाविष्यको मागको रुपायन पनि बिचार तथा साहित्यको काम हो । नब बर्ष त त्यसपछि मात्र बन्दछ ।
प्रत्येक बर्ष यस्ता नयाँ बर्षहरु आउँछन् जान्छन् । बर्षैपिच्छे यस प्रकार नब बर्षको यथार्थ के हो भन्ने कुरा नबुझी केवल औपचारिकता पूरा गरेर यो समाप्त हुन्छ । यही क्रम पुनः दोहो¥याउने गरिन्छ । ्नयाँ बर्षमा अन्तरनिहीत भावनाको गहिरो र गम्भीर अध्यन,चिन्तन, मनन र अनुगमन केही हुदैन । अहिलेसम्मका हाम्रो इतिहास कालखण्डहरु यसरी बित्दै गएका छन् ।
यद्यपि नब बर्ष केवल नयाँ समयको पर्व मात्र होइन । यो जीजीबिषा,सामुहीकता, बैभव, समृद्धिको कामना, संकल्प, नूतनताको उन्मेषको प्रकटीकरण पनि हो । बिषादको छायाँको बिरुद्ध नबीताको उद्घोष पनि हो । वास्तवमा बिगत बर्षले हामीबाट हाम्रो आकलन र मूल्यांकन चाहन्छ । नयाँ बर्ष उज्यालो बिम्बको रंगीन माछा जस्तै हाम्रो मनको संरचनामा छचल्किन्छ । नब बर्षको पक्ष आवश्यकरुपले बिगत बर्षको अघिल्लो चरण हो । यो मिठो, अमिलो,तीतो,पीरो, टर्रो आदि बिभिन्न स्वादहरुबाट संपृक्त छ । नयाँ बर्षले बिगत बर्षको सन्धि बिन्दूमा हामीलाई धेरै पटक एकान्त चिन्तन मननको सुविधा प्रदान गर्दछ । नब बर्षले हामीलाई भबिष्यका दृष्यहरुसँग परिचय गराउनतिर लैजान्छ । हाम्रो दृष्टिमा संसार उसै पनि युग्महरुबाट सिर्जित छ ः पुरानो या नयाँ, परम्परा या आधुनिकता, स्थिर र जंगम आदि इत्यादिबाट । नयाँ समयको अर्थ आत्माको रंगमा नयाँ सिर्जनाको संकल्पको रुपमा जोडिएको हुन्छ ।दुःख, बिषाद अभाव,बेरोजगारीको बज्र र संकट – यी सबै कुरा हुँदाहुदै पनि नब बर्षले हामीलाई नयाँ दुष्चक्रलाई भेदन गर्नतिर आलोकित गराउँदछ र यसका लागि उष्मा तथा ऊर्जा दिन्छ भने मात्र त्यो वास्तवमा नब बर्षको महिमा गानको अर्थ पनि हुन्छ ।
त्यसैले नब बर्षलाई साच्चै सार्थक र मूर्तरुपमा रुपमा मान्ने मनाउने हो भने पुराना या बिगतदेखिका सारा बिकृति र बिसंगतहरुलाई फाल्नु पर्दछ र फाल्ने दिशामा सचेतनरुपमा अग्रसर हुनै पर्दछ । त्यो साहस, त्यो दृिष्ट, त्यो संकल्प, त्यो नैतिकता, त्यो इमानदारीताको परिपालना अथक संघर्षको द्योतक बन्नु पर्दछ । पाखण्ड प्रदर्शन र त्यसलाई दोहो¥याइरहने औपचारिक गतिबिधिले केही हुदैन यो समयले सिकाएको अखण्डनीय पाठलाई मनन गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा हामी एउटा औपचारिकताको अन्ध अभ्यासको निरन्तरतामा खोक्रो आडम्बरमा मात्र रमाइरहेका हुन्छौं र त्यसैमा अभ्यस्त भइरहेका हुन्छौ । मनमा बिषाद मुखमा फिस्स हाँसोको आडम्बरी जीवन बाचिरहेका हुन्छौ । त्यहाँ समयोत्सव एउटा यस्तै बिडम्बनाको क्रम उपक्रम मात्र बनिरहन्छ र अभ्यस्त भइरहन्छ । हामीले आज देखिरहेको समाजको भित्री तह र सतहको वास्तविकता यही नै हो । त्यसर्थ, समयलाई आज क्रमभंगता चाहिएको छ । त्यो क्रम भंगता समाज र प्रकृतिमाथिको निर्मम दोहन र शोषण बिरुद्धको गलतबाट सहीतिर, खराबबाट असलतिर, परनिर्भरताबाट स्वनिर्भरतातिर, दुर्बलताबाट सबलतातिर, अवसरबादबाट सत्यनिष्ठातिरको अर्थपूर्ण, आधारभूत र दूरदर्शी क्रमभंगता हो ! अनि मात्र नब बर्षोत्सवको बास्तविकता सही अर्थमा जनताको सामुहीक इच्छाकोरुपमा अभिब्यक्त हुन्छ । हामी त्यस्तो समाज र परिवेश बनाउन अग्रसर होऔं ! सबैमा ग्रेगोरियन पात्रो अनुसारको अग्रेजी नब बर्षको यही मंगलमय शुभकामना छ !